I-China Vented Seal Liner mveliso kunye nabathengisi | 品牌 名 / 公司 名
Isitywina esivaliweyo senziwe ngefilimu ephefumlayo kunye ne-Heat induction seal (HIS) ngokusebenzisa i-ultrasonic okanye i-hot melt welding, efezekisa ngokupheleleyo isiphumo "sokuphefumla kwaye akukho ukuvuza". Itywina elingena ngaphakathi linoyilo olulula, ukuvumeleka komoya okugqwesileyo kunye nokuxhathisa okugqwesileyo kubantu abasebenza ngokusebenza. Le mveliso iphuhliswa ukuthintela isikhongozeli sokugcwalisa (ibhotile) ekubeni ishukunyiswe okanye ibekwe kumaqondo obushushu ahlukeneyo ukuvelisa irhasi emva kokugcwalisa ulwelo oluthile, ngalo ndlela ibangela ukuba isikhongozeli siguquke okanye isiciko sebhotile siqhekeke.
I-liner evaliweyo yeyona nto ihamba phambili ekusebenzeni komoya kolu shishino, ukhetho oluninzi lokungena ngaphakathi luzalisekisa iimfuno zomsebenzi ezahlukeneyo. Inikezelwa kwisiqwenga esinye sogwebu okanye iziqwenga ezibini ezibotshwe kwinyama
I-liner e-Vented ilungele i-PET, i-PVC, i-PS, i-PP, i-PE… iibhotile zeplastiki kunye neebhotile zeglasi, kwaye isetyenziselwa ukutya, izithambiso, amayeza, amayeza okubulala izitshabalalisi, imichiza, iimveliso zokupakisha.
Impahla eluhlaza: Ikhadibhodi + yeAluminiyam Ifoyile + Ifilimu yePlastiki
Ubukhulu obuqhelekileyo: 0.2-1.2mm
Inwebu yomoya engenayo elinganisa uxinzelelo kunye nokuthintela izikhongozeli ekuqhekekeni, ekuweni okanye ekuvuzeni.
Uyilo olwahlukileyo lokushicilela ulungelelwaniso luyadibanisa ngokulula ngokufaka ngesandla okanye ngokuzenzekelayo.
Uluhlu olubanzi lobungakanani bomoya kunye nezinto ekulungele ukuzisebenzisa eziphucula iphakheji ngaphandle kokuyila kwakhona.
1.Ukuphefumla kwaye akukho ukuvuza
2. Kulula kakhulu ukuvula
Egqithileyo Isikhuseli segwebu
Okulandelayo: I-3-Ply Foam Liner
I-Liner ezimbini zokuTywilwa kobushushu bokuTywina